काठमाडौं । भेनेजुएलाका स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति जुवान ग्वाइदो स्वदेश फर्किएका छन् । अदालतले देश छाड्न लगाएको प्रतिवन्धलाई बेवास्ता गर्दै विदेश गएका उनी फर्किँदा पक्राउ पर्ने सम्भावना थियो । तर, त्यसलाई
एजेन्सी । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्ने कुरा उठिरहँदा उनी आफैँले भने सो पुरस्कारका लागि आफू योग्य नरहेको बताएका छन् । हालै भारत प्रशासित काश्मिरमा भएको आतंकवादी
एजेन्सी । विमान चालक, आकर्षक पेसाका रुपमा रहने गरेको छ । धेरैका लागि पाइलट बन्नु सहज हुँदैन । तर यो जागिर बाहिरबाट देख्दा जति ग्लामरस देखिन्छ, पाइलट स्वयंका लागि भने
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ – अनबीचकाे दास्रो शिखर वार्ता हनोईमा भएकाे थियाे । उक्त शिखर वार्तापछि उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु हतियारको मोह
काठमाडाैं । अमेरिका र दक्षिण कोरियाले यस वर्ष संयुक्त सैनिक अभ्यास नगर्ने घोषणा गरेका छन । उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार कार्यक्रम त्याग्न लगाउने उद्देश्यले कुटनीतिक प्रयत्नका लागि संयुक्त सैन्य अभ्यास
डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा फेडरल रिजर्भको पछिल्लो नीतिको आलोचना
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडरल रिजर्भको पछिल्लो नीतिको आलोचना गरेका छन् । उनले केन्द्रिय बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण डलर मजबुत हुनपर्नेमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा चोट पु(याएको बताएका छन्
टेलिभिजनमा न्यूज भनिरहेका दुई प्रस्तोताबीच झगडा !
काठमाडौं । टेलिभिजनमा न्यूज भनिरहेका दुई प्रस्तोताबीच झगडा ! यस्तो दृश्य परिकल्पना गरिदैन । तर, पाकिस्तानको एक टेलिभिजनका दुई प्रस्तोता झगडामै उत्रिए, त्यो पनि लाइभ । पाकिस्तानको एक टेलिभिजन च्यानलका
तान्जानियामा रहेको नैट्रान तालमा पुग्ने जीवजन्तु ढुंगामा परिणत हुन्छन् !
काठमाडौं । विश्वमा यस्तो एउटा ताल छ, जसको नजिक पुग्ने जीवजन्तु पनि ढुङ्गामा परिणत हुन्छन् । सुन्दा अचम्म लाग्छ । उत्तरी तान्जानियाको एउटा तालमा यस्तै हुन्छ । यो हो नैट्रान
नाइजेरिया: बन्दुकधारीको हमलाबाट ३२ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । उत्तर नाइजेरियामा अज्ञात बन्दुकधारीको हमलामा परी ३२ जनाको मृत्यु भएको छ भने कयौ घाइते भएका छन् ।नाइजेरिया फेरि हिँसाको शिकार बनेको छ । हमलामा परी घाइते भएकाहरुको नजिकैको
एजेन्सी । कश्मीरमा बस दुर्घटना हँदा छ जनाको मृत्यु भएकाे छ भने ३० जना घाइते भएका छन् । बस सडकबाट २०० मिटर भन्दा तल खसेको स्थानीय प्रहरीले जानकारी दिएको भारतीय